IMERINTSIATOSIKA : Sarona ireo 12 lahy mpampihorohoro sy mpanao fanafihana
Manoloana ny fampihorohoroana sy firongatry ny asan-jiolahy mitam-piadiana tao amin’ny Kaominina Imerintsiatosika dia nanatanteraka fampandrian-tany sy fanadihadiana momba izany ny Zandarimariam-pirenena tao an-toerana, nanomboka ny 07 oktobra 2020 lasa teo iny. 21 octobre 2020
Nifamory nitady vahaolana niaraka tamin’ny Ben’ny tanàna tao an-toerana izy ireo tamin’izany.
Raha ny loharanom-baovao voaray dia niaina tao anaty tebiteby fatratra ny mponina tao anatin’ny andro maromaro, ka ny 17 okobra lasa teo àry dia fantatra fa voasambotry ny Zandary ny tambajotran-jiolahy, miisa 12 lahy ireo tratra amin’izao fotoana izao. Izy ireo izay nikoizana tamin’ny resaka vaky trano sy fampihorohoroana ny mponina tafihiny, ka izao tsy maintsy nanaovana hetsika manokana izao. Tamin’ny fotoana nahatrarana ireto farany moa dia mbola nahitana entana halatra maro isan-karazany, rongony milanja 03 kg, fitaovam-piadiana mahery vaika toy ny basy poleta iray niampy bala miisa sivy miaraka amin’ny “chargeur” miisa roa ary zava-maranitra tao amin’ny trano fieren’ireto farany.
Nandritra ny famotorana ihany dia voalaza fa mpamatsy bala ny jiolahy miisa roa tamin’izy ireo. Ankehitriny, tsy afa-manohy ny asa ratsiny intsony aloha ireo jiolahy, nisaotra ny mpitandro filaminana rahateo koa amin’ny ezaka goavana vita niarovana ny vahoaka sy ny fananany toy izao .
Zanany sy zafikeliny ihany no nahafaty an’ilay pasitera FANAFIHANA TAO MIARINARIVO (140) 24 novembre 2020 Zazavavy maty natelin’ny renirano ny alahady 22 novambra lasa teo BEFOTAKA AVARATRA (84) 24 novembre 2020 Liana amin’ny fampandrosoana imasoan’ny Fitondrana ankehitriny BEN’NY TANANA TIM (71) 24 novembre 2020 « Ahiana ny mety hisian’ ny kolikoly », hoy ny Kmf/Cnoe LOHOLONA (71) 24 novembre 2020 Sarona ireo teti-dratsy goavana vitan’i Prudence FISOLOKIANA AO AMIN’NY FACEBOOK (69) 26 novembre 2020 Voasazy tsy hikasika momba ny kitra mandritra ny 5 taona i Ahmad FITSARAN’NY FIFA (52) 24 novembre 2020